DomiNations 7.720.720 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.720.720 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ DomiNations
DomiNations ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Dominic အတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကနေစစ်တိုက်တိုင်းအပြည်ပြည်! သင်သည်ထိုသူတို့ကမ္ဘာ၏သမိုင်းအနေဖြင့်အကြီးအယဉ်ကျေးမှုတစ်ဦးအဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့မြို့တော်မှသေးငယ်တဲ့ရွာကနေကြီးထွားနှင့်စစ်တိုက်စေအဖြစ်သင့်အင်ပါယာနှင့် command ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကိုတည်ဆောက်စေ။
အစောပိုင်းအခြေချအဖြစ်စတင်လူမြိုးတစျမြိုး Build နှင့်ခေတ်မီခေတ်မှသမိုင်းရဲ့အရုဏ် မှစ. , အသက်အရွယ်မှတဆင့်မပေါက်ပါဘူး။ Leonardo da Vinci နှင့်ကက်သရင်းကဲ့သို့တက္ကသိုလ်မဟာမှာသမိုင်း၏မဟာအောက်မှာလေ့လာပါ။ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် Build နှင့်သမိုင်းကြောင်းတိကျတိုးတက်မှုနှင့်အတူနည်းပညာဖန်တီးပါ။
ရှစ်လူအမျိုးမျိုးထံမှ Choose နှင့်သမိုင်းမှတဆင့်တိုးတက်သမိုင်းဝင်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်စတင်။ ရောမကနေဂျပန်မှတစ်ခုချင်းစီကိုလူ့ယဉ်ကျေးမှု, အထူးခွန်အားနှင့်ထူးခြားသောယူနစ်ရှိတယ်။ အတူတူကမ္ဘာကြီးကိုအောင်နိုင်အခြား PvP တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကစားသမားများသို့မဟုတ်ပုံစံမဟာမိတ်ဖွဲ့ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့သမိုင်းဝင်တန်ခိုးကြီးစမ်းသပ်ရန်ထို့နောက်သင့်တပ်မတော်ကိုတည်ဆောက်စေ။
သင့်ရဲ့အင်ပါယာ Build နှင့်သိမျးပိုကျတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာခရီးစတင်! ယနေ့ Dominic Download!
•သစ်ကိုတက္ကသိုလ်မှာ, Leonardo da Vinci, ကက်သရင်းမဟာဘုရင် Sejong နှင့်အခြားသမိုင်းဝင်အတွေးခေါင်းဆောင်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
BRAND NEW အဖွစျအပကျြ!
•သူတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုအောင်နိုင်နိုင်အောင်သင့်ရဲ့ Nation ကြိုတင်မဲကိုကူညီရှားပါးဆုလာဘ်စုဆောင်း!
•ခေတ်သစ်ခေတ်မှလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏အရုဏ်ကနေအသက်အရွယ်မှတဆင့်၎င်းတို့၏သိမျးပိုကျစောစောမုဆိုးနှင့်စုဆောင်းသူတစ်ဦးကိုလိုနီ Lead ။
•အဲဂုတ္တုပိရမစ်များနှင့်ရောမ Colosseum တူသောကျော်ကြားအထင်ကရအဆောက်အအပါအဝင်ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်အံ့ဖွယ်, Build ။
•အချိန်မှတဆင့်၎င်း၏ခရီး 8 ကွောနိုင်ငံများအသင်းတဦးတည်း၏အဖြစ်တိုက်ပွဲ။
•ရောမ, ဗြိတိန်, တရုတ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့်ဟေလသလူနဲ့တူသမိုင်းကနေအကြီးအယဉ်ကျေးမှု၏တဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။
•တိုက်ပွဲသမိုင်းတဆင့်နှင့် longbowmen, Vandalic, နှင့်ခွန်အားကြီးသောဆာမူရိုင်းလိုပဲသင့်ရဲ့မြို့တိုး!
•ဒဏ္ဍာရီဂိမ်းဒီဇိုင်နာဘရိုင်ယန် Reynolds ကသမိုင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကာလကနေ key ကိုတိုးတက်မှုအဖြစ်တိုင်းခေတ်ဘဝမှသမိုင်းဆောင်တတ်၏သင်သည်သင်၏မော်ကွန်းယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာမှာကိုကူညီမည်!
, သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိမှတဆင့်•ပိုကောင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သင်၏တပ်များအားကောင်းလာစေရန်, ခေတ်မီပစ္စည်းများနှင့်သင်၏အဆောက်အဦးများနှင့်မြို့အလယ်ဗဟို upgrade ။
ပုံစံမဟာမိတ်နှင့်လုပ်အားခ World War
• PvP တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်အဆုံးစွန်စမ်းသပ်ဖို့သင့်အစွမ်းထက် Nation ထားပါနဲ့ပြန်ပေးလော့၏ကြီးမားခိုင်အဘို့သင်၏ရန်သူတို့ကို '' မြို့ကြီးများ RAID!
• 50-On-50 မဟာမိတ်အဖွဲ့စစ်ဆင်ရေး၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက် outwit နှင့် outlast တစ်မူထူးခြားတဲ့စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာနှင့်သင်၏ဗိုလ်ခြေအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့တိုက်ဖျက်မည်။
သမိုင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုထဲကတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်အောင်နိုင်မှတစ်ဦးသည်စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုး။ တစ်မဟာမိတ် join နဲ့ Dominic ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအောင်မြင်ရန်!
DomiNations အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DomiNations အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DomiNations အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DomiNations အား အခ်က္ျပပါ
catterydevelopee စတိုး 102 21.21k
DomiNations ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DomiNations အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.720.720
ထုတ်လုပ်သူ NEXON M Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.nexonm.com/privacy-policy/
Release date: 2019-06-13 21:19:42
လက်မှတ် SHA1: 42:42:68:85:62:1F:B2:C9:DF:52:19:77:58:1D:7E:2F:DE:87:0C:50
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Chris Coleman
အဖွဲ့အစည်း (O): Big Huge Games
နယ်မြေ (L): Timonium
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Maryland
DomiNations APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ